Zimbabwean charged with disorderly conduct for saying President Mnangagwa has failed - Povo News
By staffwriter on October 8, 2019
45-year old Saymore Mashorokoto is appearing at the Bindura Magistrates Court today on charges of disorderly conduct for saying Zimbabwe’s President Mnangagwa has failed.
Mashorokoto was charged after telling a fellow resident Tichaona Svinurai that President Mnangagwa should cede power to main opposition leader Nelson Chamisa since he has failed to revive the economy.
The Zimbabwe Republic Police charged Mashorokoto for contravening section 41(b) of the Criminal Law (Codification and Reform) Act arguing his words were threatening, abusive, or insulting words intending to provoke a breach of the peace.
President Mnangagwa came to power after a military coup deposed 37-year ruler Robert Mugabe in November 2017, he subsequently won an election in 2018 that the main opposition allege was rigged.
According to Zimbabwe’s Finance Minister Mthuli Ncube, the country’s economic growth is expected to decline by 6.5% in 2019 while US economist Professor Hanks puts the annual inflation rate at 670%/yr.
Picture of Mashorokoto at the Bindura Magistrates Court today with his lawyer from the Zimbabwean Lawyers for Human Rights